Sida loogu isticmaalo AirDrop macruufka 9 | Wararka IPhone
Sida loo isticmaalo AirDrop ee iOS 9
Apple ayaa na soo jeedisay AirDrop, a hab cusub oo lagula wadaago faylasha inta u dhexeysa qalabkaaga Xagaagii 2013, markii la soo saaray macruufka 7. Markii hore ma ahayn mid u dhexeeya OS X iyo iOS, laakiin waxay ahayd tan iyo markii la bilaabay OS X Yosemite xagaagii la soo dhaafay. Isticmaalka AirDrop waa mid aad u fudud oo aan lahayn sir badan, laakiin su'aasha ay dad badan oo isticmaala ay na weydiiyaan ayaa ah sida loo isticmaalo AirDrop inbadan oo idinka mid ahna shaki ayaa ka qaba sida loo isticmaalo macruufka 9.
Hawlgalka AirDrop ee iOS, haddii aan si sax ah u xasuusto, isma beddelin tan iyo markii la bilaabay hadda in ka badan laba sano ka hor, Iswaafajinta OS X dhinac. Intaas waxaa sii dheer, mahadi ha ka gaadho Xarunta Xakamaynta waxaan u hawlgelin karnaa oo aan u joojin karnaa sida ugu dhakhsaha badan sida hoos looga boodboodo oo aan u taabto qoraalka oranaya "AirDrop" hababka soo baxa. Iyo, si ka duwan barnaamijyada kale ee App Store, si loo isticmaalo AirDrop looma baahna in labada qalab ay ku xiran yihiin isla shabakada WiFi.
Markaad isticmaaleyso WiFi iyo Bluetooth, feylasha waxaa loo soo diraa si ka dhaqso badan kan kaliya ee Bluetooth laakiin, dabcan, ma lahan barbardhig lagu sameeyo wareejinta NFC oo, habka, loogu khasaariyo macruufka.
1 Sida loo isticmaalo AirDrop ee iOS 9
1.2 Sida loo hawlgeliyo AirDrop
1.3 Sida loola wadaago AirDrop
iPhone 5 ama ka dib.
Jiilka 4aad ee iPad ama ka dib.
iPod taabashada jiilka 5aad ama ka dib.
Sida loo hawlgeliyo AirDrop
Waxaan fureynaa Xarunta Xakamaynta. Si tan loo sameeyo, farta ayaan ka siibaneynaa salka hoose ilaa kor.
Xarunta Xakamaynta, waxaan dhaqaajineynaa AirDrop. Markaad taabatid qoraalka oranaya "AirDrop" waxaan arki doonnaa in menu lagu muujiyo xulashooyinka laga kala dooran karo. Waxaan ka dhigi karnaa Qof walba inuu na helo, Kaliya xiriiradayada ama cidna (aan la furin). Waxaan dooraneynaa waxa aan doorbidno, laakiin haddii aan dooranno Kaliya xiriirada marwalba waan dardargelin karnaa (in kasta oo ay cuni doonto batteri badan) Labada WiFi iyo Bluetooth labadaba si otomaatig ah ayaa loo hawlgelin doonaa. Ka dib markii la wadaago faylasha waxaan ku qasbanaaneynaa inaan kala furno gacanta.
Sida loola wadaago AirDrop
Waxaan fureynaa arjiga ay kujiraan feylka aan rabno inaan wadaagno. Xaaladdan oo kale waxaan ku samayn doonnaa «Sawirro».
Waxaan doorannaa faylka waxaan rabnaa inaan dirno.
Waan ciyaarnay share (
Waxaan doorannaa xiriirka taas oo ka muuqata xulashada AirDrop. Qalabka bartilmaameedka waa in la furo si loo helo faylka
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo isticmaalo AirDrop ee iOS 9
iyo dhiirrigelin dijo
Taasi maahan wax cusub: /
Jawaab iyo dhiirrigelin
dhab ah? qoraalkani ma loo baahan yahay? si fiican haddii ay ka dhib badan tahay macruufka 9 marka loo eego 8 (sarcasm)
Sameynta waa mid aad u fudud, in si sax ah ay u shaqeyso waa wax kale, waqtiga nuska ah ma helayo qalabka ama aad ayey u gaabisaa ama wareejinta ayaa ku guuldareysata.
Ku jawaab chussskyjesus
IOS 9 macbook-gu iima ogaado. Kaligay baa ahay ??? Kahor mararka qaarkood waxay qaadatay waqti in la helo laakiin hadda xitaa taasi ...
Ku jawaab eduah74
Sidoo kale ma heli karo Macbook Pro inuu ka muuqdo iPhone 6 oo leh iOs9.
Waxaa laga yaabaa inay jiraan wax qaabeyn ah oo loo baahan yahay in lagu sameeyo mac si ay u ogaato, sida wadaagista ama wax la mid ah?
Ku jawaab diazbermejo
Kaliya kaligaa ma tihid ... maanta waxaan la ildaran yahay isla dhibaatadaas, waxaa soo bixi doonta in jagada loo baahnaa intii loo baahnaa.
Waxaan maareeyaa in aan ku wada xiriiro labada iPhone 5 iyo 5S aniga oo adeegsanaya AirDrop, laakiin ma heli karo Mac mini si aan u arko iPhone 5 (xiisaha leh, 5S wuu shaqeeyay ilaa iyo hada waxaan arkay iPhone 5). Mac mini wuxuu ku jiraa nooca Yosemite.
Ku jawaab ramonol
Isla waxbaa igu dhaca aniga, xitaa waxay igula taliyeen tufaaxa wayna ila soo wacayeen tan iyo markii ay xalin kari waayeen arinta, bil ayaa ka soo wareegtay oo ima soo wicin ...
Ku jawaab Claudio Salas